IYunivesithi yeSan Francisco: I-SAT Score, I-Acceptance Rate
Izikolo ze-SAT, Imilinganiselo yokwamkelwa, iNcedo lwezeMali, kunye nokunye
IYunivesithi yaseSan Francisco inomyinge wokwamkela ama-71 ekhulwini ngo-2016 kwaye abafundi abavunyelwene ngokubanzi banamabanga kwaye amanqaku okuhlolwa asemgangathweni angenani ubuncinane kumyinge ophezulu. IYunivesithi inenkqubo yokwamkelwa epheleleyo kunye nesicatshulwa sakho kunye nemisebenzi yecandelo elongezelelweyo liya kuqwalaselwa ngabantu abamkelweyo. IYunivesithi iphinda ikwazi ukubona abafakizicelo abaye bahamba ngaphaya kweemfuno ezisisiseko zemfundo yesikolo esiphakeme.
UkuPhakamisa okuPhambili, i-IB, i-Honors, kunye neeklasi zokubhalisa eziphindwe kabini zonke uncedo lubonisa ukulungela ikholeji yakho. I-USF isebenzisa isicelo esiqhelekileyo .
IYunivesithi yaseSan Francisco I-Acceptance Rate: iipesenti ezingama-71
GPA, SAT kunye ne-ACT Graph kwi-Admissions ye-USF
SAT Ukufunda okubalulekileyo: 510/620
ISAT Math: 520/630
IYunivesithi yeSan Francisco Inkcazo
Eyasungulwa ngowe-1855, iYunivesithi yaseSan Francisco iyunivesithi yangasese ye-Jesuit ehlala entliziyweni yeSan Francisco. Iyunivesiti inqabisa isiko layo lama-Jesuit kwaye igxininisa ukufunda kwinkonzo, ukuqonda jikelele, ukuhlukahluka kunye nokugcinwa kwendalo. I-USF inikezela abafundi amathuba amaninzi ngamazwe afaka phakathi ama-50 afundela ngaphandle kwamaprogram kumazwe angama-30. Iyunivesithi inokulinganisa ubungakanani beklasi ye-28 kunye ne-14 ukuya kwe-1 yomlinganiselo womfundi / ubuchule .
Iingcali zenzululwazi, isayensi yezentlalo, kunye nezoshishino ziyaziwa kakhulu phakathi kwezifundo zakudala. Kwiimidlalo, ii-USF Iinkonzo zincintisana kwiCandelo le-NCAA I- Confederation Coast Coast .
Ubhaliso lwabonke: 11,003 (6,745 izifundo zakudala)
Isifundo kunye neMali: $ 44,494
Igumbi neBhodi: $ 13,990
Ezinye iindleko: $ 3,800
Iindleko ezipheleleyo: $ 63,884
IYunivesithi yaseSan Francisco Uncedo lwezeMali (2015-16)
Ipesenti yabafundi abatsha abafumana inkxaso: i-78 ekhulwini
Izibonelelo: iipesenti ezingama-77
Imali: iipesenti ezingama-46
Izibonelelo: $ 26,105
Imali: $ 8,003
I-Popular Majors: I- Applied Economics, i-Biology, uLawulo lwezoShishino, Izifundo zoNxibelelwano, ezeMali, ukuThengisa, ukuLondolozwa, iiNzululwazi zokuziphatha, iNzululwazi yezopolitiko, i-Psychology, i-Sociology
Ukugcinwa kwabafundi bonyaka wokuQala (abafundi bexesha elipheleleyo): ama-86 ekhulwini
Ukukhutshwa kweRhafu: Iipesenti ezili-17
Ireyithi yokuQinyezelwa kweNyaka-4: i-62 ekhulwini
Izinga lokuQinyezelwa kweNyaka eyi-6: iipesenti ezingama-72
Ezemidlalo zaMadoda: Ibhola lebhola, iBhola, iGalofu, iNgcahla, i-Tennis, i-Track, ne-Field
Ezemidlalo zaBasetyhini: I- Volleyball, iTennis, iChola, iMzila kunye neNgcambu, iBhola lebhola, iGoli
Ukuba Uthanda iYunivesithi yaseSan Francisco, Unako ukungafani nalezi zikolo
KwiYunivesithi yaseSan Francisco
KwiYunivesithi yaseSan Diego
ILoyola Marymount Yunivesithi
I Pepperdine University
IYunivesithi yaseSan Francisco Mission Statement
Funda isitatimende esipheleleyo se-mission kwi-https: //www.usfca.edu/about-us//ho-we-re/vision-mission
Iinjongo eziphambili zeYunivesithi kukukhuthaza ukufunda kwizithethe zamaKatolika zaseJavait. IYunivesithi inikeza abafundi besikolo esiphantsi, abagqibeleleyo nabafundi abaqeqeshiweyo ulwazi kunye nezakhono ezifunekayo ukuze baphumelele njengabantu kunye nabaqeqeshi, kunye nexabiso kunye nobubele obuyimfuneko ukuba babe ngamadoda nabasetyhini abanye.
IYunivesithi iya kuhlula ngokwahlukileyo njengentlalo ehlukeneyo yoluntu, yoluntu oluphezulu nolwazi oluphezulu olufundiswa lukholo olwenza ubulungisa. IYunivesithi iya kubakho kwiinkcubeko, ukuqonda kunye nezoqoqosho kwiSan Francisco Bay Area kunye neendawo zayo kwiPacific Rim ukucebisa nokuqinisa iinkqubo zayo zemfundo. "
I-Admissions yeeKholeji zaseBlackburn
I-Admissions yeYunivesithi yaseWest Virginia
I-Emerson College Admissions
Izinzuzo zoDaniso yokuDansa
Indlela yokudibanisa "Reveiller" (ukuvuka)
Iyiphi i-Term "Niche" Ethethayo kwi-Biological Biology?
UBharbara Bush: uMongameli wokuqala
UMgangatho weMigangatho Ukuqhathaniswa kokungeniswa kwiiKholeji zaseCalifornia
Indlela yokulungisa kunye nokugcina i-Old Stucco
Udwebo kwiPhepha ngeoli
My Spider Mythology and Folklore
Indlela yokuqala i-Small-Homeschool Co-Op